नर्वेको विकास मन्त्री नेपाल आउँदै
चरिकोट। नर्वेका विकास मन्त्री निकोलाई अस्ट्रुप दोलखा आउनुहुने भएको छ । नेपालको विकास निर्माणको अवस्था र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबारे बुझ्न र नर्वेजियन सरकारको सहयोग बनेको विद्यालय हस्तान्तरण उहाँ यही फागुन २२ ..
एन्फालाई जापानी सरकारको सहयोग
काठमाडौँ, १६ फागुन । सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कम्प्लेक्स मैदानको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ७४ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । जापानी दूतावासद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ..
‘काठमाडौँमा भारतीय रेल आउनुपर्छ’- भारतीय नेता भगतसिंह कोस्यारी
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोस्यारीले ‘नेपालको काठमाडौँमा भारतीय रेल आउनुपर्छ’ भन्ने अवधारणामा भारत अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको ..
१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत तयार छ : कोशियारी
काठमाडौँ। नेपाल भारत सम्वन्धको सबैभन्दा जटिल विषय बन्दै आएको सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सबै खाले सम्झौता पुनरावलोकनमा भारत तयार भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न ..
राष्ट्रपति ट्रम्पको आयो प्रम ओलीलाई बधाई
काठमाडौँ, ११ फागुन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएकामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाउनुभएको बधाई सन्देशमा तीनवटै ..
राष्टिय सभामा डा. खतिवडा सहित तीन जनाको नाम सिफारिश
काठमाडौं । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. युवराज खतिवडा, माओवादीका पूर्व सांसद रामनारायण बिडारी र बिना पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ। यस अघि देउवा सरकारले सिफारिश ..